When Global Meets Local - How Expatriates can Succeed in Myanmar - When Global Meets Local
AUTHOR: ANDREW P. JOHNSON | 02 APR 2019 | VOL7ISSUE 14
Myanmar Business Today’s senior editor had the opportunity to sit and talk with Hana Bui about her new book and why all expats should give itaread.
“The book is the first of its kind to meet the needs for expats working and living in Myanmar,” said Hana. “It’s the cultural differences that are the biggest difficulties for foreigners working in Myanmar.”
Hana pointed toaquote from The Economist on the back cover of her book. “A survey of senior executives from 68 countries indicates that 90 percent see ‘cross-cultural leadership’ as the biggest management challenge of this century. Up to 40 percent of managers sent on overseas assignments terminate early. The cost to employers of each early return is between USD 250,000-1,250,000.”
This data certainly show the value ofabook like Hana’s, and might very well help protect the investmentacompany makes when they send managers overseas to Myanmar. However, when looking over the book for myself, it seems clear that many types of foreigners would be interested in reading this book, including teachers, NGO employees, and even tourists that come forapeak at this exotic land.
I asked Hana about her background, and she said she is originally from Vietnam, but holds an MA degree on Globalization and Communications from the University of Leicester, UK. She has been in communications and human resources for years and hasastrong interest in global-local interrelations. She’s been living in Myanmar for the past six years, and views herself asacultural bridge between Myanmar and the world.
I then asked what brought her to Myanmar in the first place, and she explained how in 2012, she saw great potential for growth in Myanmar and wanted to be apart of that. Over the next five years she said she began to seeaneed forabook like this. She said, “With the encouragement from Werner Eggert,aGerman journalist from Interlink Academy, I set out to put into writing the wisdom I’ve accumulated.”
I asked how long it took her to research the subject and write the manuscript. She said, “It tookafull year. I carried outasurvey of over 100 expats — who have lived here for overayear — and 50 local professionals. I also conducted 30 in-depth interviews with local professionals and expats for their comments on challenges and viewpoints.”
Getting the viewpoint from local professionals is important so expats can begin to see things fromalocal person’s point of view, and to understand what locals think of foreigners.
The book is written so that it is very easy to understand, and covers common problems expats face when working with locals, things like: communicating, relationships, micromanaging, and training. There are also summaries throughout the book showing practical solutions that expats can utilize to be successful.
When I showed the book to Min Thu Aung, Myanmar Business Today’s translator, he said, “Wow, this isagreat book, I think it will be good for foreigners and locals.”
An electronic version of the book can be purchased on Amazon here: https://www.amazon.com/When-Global-Meets-Local-Expatriates-ebook/dp/B07M…
You can also find the book in local shops around Yangon:
Bagan Book House (No. 100, 37th Street)
Ar. Yone Thit Bookshop (No. 365, Bogyoke Aung San Road – between 30th and 31st Street)
Pansuriya Restaurant (100 Bogalay Zay Street, Botataung Township)
Yar Pyae (No. 264, Pansodan Street, Upper block)
Thalun Book Store (Bogyoke Aung San Road and 45th Street)
နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို မလာ ခင် ဖတ်သင့်သည့် စာအုပ်တစ်အုပ်လေများ ရှိလေမလား။ ရှိပါသည်။
စာအုပ်အသစ် When Global Meets Local-How Expatriates can Succeed in Myanmar
ကို မတ်လ ၁ဝ ရက်နေ့က Pansuriya Art Gallery
အကြီးတန်းအယ်ဒီတာသည် Hana Bui
နှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရကာ မြန်မာ ပြည်ရောက်နိုင်ငံခြားသားများ ဘာကြောင့် ဖတ်သင့်သည်ကို ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
”ဒီစာအုပ်က မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင် အလုပ် လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ လိုအပ်ချက် နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ¤င်းက ဆိုသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံ ခြားသားတွေအတွက် အကြီးမားဆုံးအခက် အခဲကတော့ ယဉ်ကျေးမှုမတူညီခြင်းပဲဖြစ် ပါတယ်”
က သူ့စာအုပ်နောက်ဖုံးရှေ့ The Economist
မှာစာကြောင်းကို ညွှန်ပြ ပါသည်။ ”နိုင်ငံပေါင်း ၆၈ နိုင်ငံမှ အကြီးအ ကဲများကို မေးမြန်းစစ်တမ်းကောက်ထားရာ တွင် ¤င်းတို့၏ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းက ယဉ်ကျေးမှု မတူဘဲ ခေါင်းဆောင်မှုပေးရခြင်းသည် ယခု ရာစုနှစ်၏အကြီးမားဆုံးသော စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု မြင်ကြ သည်။ ပြည်ပသို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် တာဝန်ပေးခံရသော မန်နေဂျာ စုစုပေါင်း၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ စောစီးစွာ တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းခံရသည်။ စောစီးစွာပြန် လာရခြင်းအတွက် အလုပ်ရှင်များကုန်ကျရ သည့် ကုန်ကျမှုမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းငါးသောင်းမှ ဆယ့်နှစ်သိန်းငါး သောင်းအထိရှိသည်။”
၏စာအုပ်ကဲ့ သို့သော် စာအုပ်များ၏တန်ဖိုးကို ပြသနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ မန်နေဂျာများစေလွှတ်သည့် အခါတွင် ကုမ္ပဏီများပြုလုပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့် သည့်အခါတွင်တော့ ဆရာများ၊ NGO
ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်သော ကမ္ဘာ့လည့်ခရီးသည်များ အပါအဝင်နိုင်ငံ ခြားသားတော်တော်များများပင် ဤစာအုပ် ကိုဖတ်ရန် စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်ဟု မြင်မိ ပါသည်။
သူ့အကြောင်းကို မေးကြည့်သည့်အခါတွင် Hana
င်းမှာ ဗီယက်နမ်ဇာတိဖြစ်ပြီး UK
ရှိ University of Leicester rS Glo-balization and Communications
မှ ဘာသာရပ်ဖြစ် MA
ဘွဲ့ရရှိထားသည်ဟု ပြောသည်။ ပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် လူသား အရင်းအမြစ်နယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျင်လည်နေပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်-ဒေသအဆင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွင် များစွာစိတ်ဝင် စားသည်ဟုဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခြောက် နှစ်ကြာ နေထိုင်နေပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် မြန်မာ နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာကိုဆက်စပ်ပေးသော ယဉ်ကျေး မှုတံတားအဖြစ်မြင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့ မေးသည့်အခါတွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအလားအလာများကို တွေ့ မြင်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်လိုခဲ့ ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း က ယခုလိုစာအုပ်မျိုး ပေါ်ထွက်လာရန် လို အပ်သည်ကို သဘောပေါက်လာခဲ့သည်။
”ှု Interlink Academy
က ဂျာမန်လူမျိုး ဂျာနယ်လစ် Werner Eggert
ရဲ့အားပေးမှု နှင့်အတူ ကျွန်မသိထားတဲ့အသိတွေကို စပြီး ချရေးဖြစ်တယ်”
စာအုပ်ပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက် ၍ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊ စာမှုကြမ်းရေးခြင်း လုပ်ရာတွင် အချိန်မည်မျှ ယူခဲ့ရသနည်းဟု မေးသည့်အခါတွင် ¤င်းက” တစ်နှစ်တင်း တင်း ကြာခဲ့တယ်၊ ဒီမှာနေတာ တစ်နှစ် ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား အယောက် တစ်ရာကျော်ကို မေးမြန်းခဲ့တယ်။ ဒေသခံ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အယောက် ၅ဝ ကျော် ကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်တွေနဲ့လည်း သူတို့ စိန်ခေါ်မှုတွေ အမြင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူး အကြိမ်ရေ ၃ဝ လောက်လုပ်ခဲ့တယ်”ဟု ပြော ပါသည်။
ဒေသခံ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များ၏ အမြင် များကိုရရှိရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအမြင်များမှ တဆင့် နိုင်ငံခြားသားအနေဖြင့် ဒေသခံများ ၏ အမြင်ကို သိရှိခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ ခြားသားများအပေါ် ဒေသခံများ၏ အမြင် ကိုလည်းသိရှိနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာအုပ်ကို ဖတ်လို့လွယ်ကူအောင်ရေးသား ထားပြီး စာအုပ်ထဲမှာလည်း ပြောဆိုဆက် သွယ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ အသေး စားစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း ကဲ့သို့သော ဒေသခံများနှင့်လက်တွဲလုပ် ဆောင်ရာတွင် ကြုံရလေ့ရှိသည့် ပြဿနာ များကို ထည့်သွင်းရေးသားထားပါသည်။
ထိုစာအုပ်ကို MBT ၏ ဘာသာပြန်ဆရာ မင်းသူအောင်အား ပြကြည့်ရာတွင် ”သိပ် ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပဲ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ အတွက်ရော ဒေသခံတွေ အတွက်ရော ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်”ဟု ပြောပါသည်။
အဆိုပါစာအုပ်ကို အမေဇုန် https://www amazon.com/When-Global-Meets-Local -Expatriates-ebook/dp/B07MXV2W7
တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်ရှိ ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ အာရုံသစ်စာ အုပ်ဆိုင်၊ Pansuriya
စားသောက်ဆိုင်၊ ရာပြည့်စာအုပ်ဆိုင်၊ သာလွန် စာအုပ်ဆိုင် တို့၌ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
Previous Post A guide for expats in Myanmar: When Global Meets Local
Next Post How Expats and Locals can work together for success in Myanmar